Marbra Phone Case
New teknolojia imd China electroplated oem cust ...
vokatra vaovao oem tariby lamba tranga ho an'ny iPhone M ...
Nahoana no mifidy ny Iml Phone Case?
lahateny fohy indrindra
IML ny teknolojia mampiasa ny PET sarimihetsika mba hanafaka ny fakantahaka. Dia ho azo antoka ny fotoana fohy deliery.
OEM famolavolana. Loko sy ny fomba azo ovana amin'ny fotoana rehetra mandritra ny famokarana.
PET FILM no tena teknolojia ny IML. Malefaka sady tsara tarehy tarehy, excellet Scratch fanoherana.
PET FILM-dia ny fomba pirinty anatiny. Tsy lefy, sy maro loko mamirapiratra foana.